Multi miloko maharitra M-XXXXL fisaka hidin-dehilahy miloko malefaka |
Hetezo ny fifaninanana taloha ao amin'ny pisinina mitafy jammer teknika natao hanatsarana ny fahaizanao. Namboarina avy amin'ny lamba Faharetana + misy zana-lalana efatra hihazonana ny endrika sy famaranana mahazaka klôria ho an'ny endrika maharitra, ity farany maina haingana ity dia manome fandrakofana sy fampiononana.
Ny lamba maivana sy maina haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha dia malaza noho ny fihazonana endrika tsara sy ny famoretana hozatra.
Ny lamba maharitra sy maharitra indrindra fivarotana klôria manohitra anay. Mitazona miloko rehefa avy milomano.
Ny klôria dia mahatohitra ary natao ho an'ny hetsika. Mihazona hatramin'ny 10x ny halavany mihoatra ny akanjo milomano mahazatra.
Fanohanana sy fampiononana optimum ho an'ireo izay ao anaty rano 2-3 andro isan-kerinandro.
Previous: Ny fahatsapana ny hamandoana Mahazo aina tsara ny olon-dehibe amin'ny akanjo milomano ho an'ny Surfing
Manaraka: Panam-baravarankely miendrika fanakatonana 29.5 ″ -45.3 ″ Akanjo fandroana amin'ny lehilahy